ရေဗလုံ (အင်္ဂလိပ်: Masked Finfoot) ကို ပါဏဗေဒအလိုအရ ဟယ်လီယိုပေး ပါဆွန်နာတာ (Heliopais personatus) ဟုခေါ်သည်။ ထိုငှက်သည် ဟယ်လီအော်နီသီဒီး မျိုးရင်းတွင် ပါဝင်၏။ အလွန်တွေ့မြင့်ရခဲ၍ ရေဗလုံငှက်ကို လူသိနည်းသည်။ ရေထဲသို့ ပြွန်ချောင်းတစ်ခုဖြင့် လေမှုတ်သွင်းရာ၌ ရေပွက်များထကာ မြည်သောအသံကဲ့သို့သော ယင်း၏အသံကို စွဲ၍ ရေဗလုံငှက်ဟု ခေါ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် အသံစူးသည်။ မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်ရန် အလွန်အန္တရာယ်ရှိသောငှက်ဖြစ်ပြီး အိန္ဒိယတိုက်ငယ်၊ အင်ဒိုချိုင်းနား၊ မလေးရှားနိုင်ငံ၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတို့တွင် တွေ့ရလေ့ရှိသည်။
ရေဗလုံငှက်၏ ကိုယ်ထည်သည် အလျား ၂၄ လက်မ ရှိသည်။ လည်တိုင်သည် ငန်း၏လည်တိုင်နှင့် တူသည်။ အဖိုနှင့် အမပုံသဏ္ဌာန်ချင်း မတူချေ။ ရေဗလုံငှက်အမများ၏ မေး၊ လည်ပင်းနှင့် လည်တိုင် အရှေ့ဘက်ပိုင်းများသည် ဖြူ၍ ပတ်လည်တွင် အမည်းရောင်ရှိသည်။ အဖိုများ၌မူ အနားဘက်၌ အဖြူရောင်များ ထပ်၍ ပါရှိသည်။ ငှက်ဖိုနှင့် ငှက်မများ၏ မျက်လုံးအရောင်မှာ အဝါဖြစ်သည်။ အဖိုများ၌ သားပေါက်ချိန်တွင် နှုတ်သီးရင်းတွင် အသားပိုကလေးတစ်ခု ထောင်လျက်ရှိသည်။ မိုးကုန်ချိန်တွင်မူ ထိုအသားပိုကလေးသည် တွန့်လိမ်သွား၍ ပျောက်ကွယ်သွားသည်။ အမများ၌ ဤကဲ့သို့သော အသားပိုမျိုး မရှိချေ။ ငှက်ကလေးများသည် အမများနှင့် တူသော်လည်း ဦးခေါင်းထိပ်သည် မမည်းချေ။
ရေဗလုံငှက်တို့ကို သားပေါက်ချိန်၌ ရေလျှံသစ်တောဒေသများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရွံ့နွံထူထပ်သော နေရာများတွင် တွေ့ရလေ့ ရှိသည်။ သာမန်အချိန်များတွင်မူ ရေတက်ရေကျရှိသော ချောင်းများနှင့် အမြဲစိမ်းတောများအနီးရှိ ချောင်းများတွင် တွေ့ရတတ်သည်။ ရေဗလုံငှက်သည် လျင်မြန်စွာ ရေကူး ရေငုပ်နိုင်သည်။ ဘေးအန္တရာယ်နှင့် တွေ့ကြုံသောအခါ ကုန်းပေါ်သို့ ပြေးတက်၍ ပုန်းအောင်းတတ်သည်။ မထိတ်လန့်လျှင် ရေမှထ၍ ပျံသန်းတတ်ကြသည်။ ကြောက်လန့်လာလျှင် ရေထဲသို့ တစ်ကိုယ်လုံးငုပ်၍ ဦးခေါင်းနှင့် လည်တိုင်ကိုသာ ရေပေါ်တွင် ဖော်ထားတတ်ကြသည်။ ရေပြင်မှထ၍ ပျံသန်းရာတွင် ရေကြက်ဒုံနှင့် တူသည်။ သို့သော် ပထမတွင် ရေပြင်နှင့် ယင်း၏ တွဲလျားကျနေသော ခြေထောက်များ ထိနေတတ်သည်။ အရှိန်ရလာသောအခါတွင်မူ လျင်မြန်စွာ ပျံသန်းနိုင်သည်။ ကောင်းမွန်စွာလည်း လမ်းလျှောက်နိုင်၍ ကိုယ်ကို ခပ်စောင်းစောင်း ထားတတ်သည်။ ယင်း၏အစာမှာ ခရု၊ ပိုးကောင်နှင့် အသီးအရွက်များ ဖြစ်သည်။
အသိုက်များကို မှောင်ပိတ်နေသော နွယ်ပင်များကြားတွင် သစ်ကိုင်းကလေးများကို တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ထပ်၍ ပြုလုပ်ကြသည်။ ကျီးကန်းအသိုက်များနှင့် တူ၍ ခပ်ဝိုင်းဝိုင်းဖြစ်ပြီးလျှင် အချင်း ၁၅ လက်မခန့် ရှိတတ်သည်။ ဥများ အုသည့်နေရာကမူ အချင်း ခုနစ်လက်မခန့် ရှိတတ်သည်။ ဥများသည် မလိုင်ရောင် ဖြစ်ပြီးလျှင် အညိုနှင့် ခရမ်းရောင်အပြောက်များ ပါရှိသည်။ အသိုက်များကို ရေမျက်နှာပြင်နှင့် လက်မ အနည်းငယ်မှ ကိုးပေအထိ မြင့်သောနေရာများတွင် လုပ်တတ်သည်။ တစ်မြုံလျှင် ဥပေါင်း ငါးလုံးမှ ခုနစ်လုံးအထိ ရှိသည်။
ရေဗလုံငှက်တို့ကို အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဗင်္ဂလားပြည်နယ်နှင့် အာသံပြည်နယ်တို့မှ မြန်မာနိုင်ငံကို ဖြတ်၍ ဆူမတြာကျွန်းအထိ တွေ့နိုင်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း၌ ရေဗလုံငှက်များကို သာယာဝတီခရိုင် မြစ်မခမြစ်နား တစ်ဝိုက်တွင် တွေ့ရသည်။ ဗန်းမော်ခရိုင် ရွှေဂူမြို့နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် အင်းတော်ကြီးဒေသတွင်လည်း ရေဗလုံငှက်အချို့ကို တွေ့နိုင်သည်။ ထိုဒေသနေ လူများက ရေဗလုံငှက်များသည် ထိုဒေသ၌ မိုးဥတုတွင် သားပေါက်ကြသည်ဟု ဆိုသည်။ ကသာခရိုင်ဆိပ်သာအနီး၌လည်း ထိုငှက်များကို တွေ့ရသည်။ ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသဖြစ်သော မြောင်းမြမြို့အနီးတွင်လည်း တွေ့နိုင်သည်။ ထို့အပြင် ပဲခူးခရိုင် အင်းတကော်ဘက်တွင်လည်း ထိုငှက်များကို တွေ့နိုင်သည်။ ရေဗလုံငှက်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၌ အမြင်ရနည်းသော်လည်း နေရာအနှံ့အပြားတွင် နေလေသည်။
↑ BirdLife International (2012). "Heliopais personatus". IUCN Red List of Threatened Species 2012. IUCN. old-form url
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရေဗလုံ&oldid=711495" မှ ရယူရန်
၂၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၇:၂၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၇:၂၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။